HTML एक्सटेक्टर के हो? सिल्टल HTML कागजातहरूबाट पाठ निकाल्नका लागि प्रसिद्ध उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछ
एचटीएमएल एक्स्टोरर वा स्क्रैपर भनेको उपकरण हो कि मेटा-ट्याग निकाल्छ, मेटा वर्णन र सामग्रीको एक अंशको शीर्षकहरू. सरल एचटीएमएल कागजातहरूको डेटा प्राप्त गर्न, तपाइँसँग मात्र आधारभूत कोडिङ कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दछ. तर परिष्कृत एचटीएमएल कागजातहरूको लागि, तपाईंले विश्वसनीय सामग्री निकाय वा स्क्रैपर्स प्रयोग गर्न आवश्यक छ. त्यहाँ विभिन्न प्रोग्रामिङ भाषाहरू छन् जुन जाभा, पाइजोन, पीएचपी, नोड जे एस, सी + + र जे एस जस्ता सामग्रीहरू सरल र जटिल एचटीएमएल फाईलहरूबाट सामग्री निकाल्न आवश्यक छ।. तपाईंको HTML-सम्बन्धित कार्यहरूको लागि निम्न उपकरणहरू उत्तम छन्.
1 - high noon casino $60 free. आयात गर्नुहोस्. io:
आयोत. io इन्टरनेटमा उत्कृष्ट सामग्री स्क्रैपर्स र एचटीएमएल एक्सटरहरू मध्ये एक हो. यसले धेरै भाषाहरूमा र स्लाइसहरूमा सञ्चालन गर्दछ र तपाईंको एचटीएमएल कागजात डाइरेक्ट गर्दछ, तालिकाहरू र सूचीहरूको रूपमा डेटा उत्पादन गर्दछ. यो कार्यक्रमले JSON ढाँचामा तपाईंको मेटाडाटा डाउनलोड गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ.
अक्टोपारे प्रयोग गर्दै, तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट धेरै मात्रामा डेटा निकाल्न सक्नुहुनेछ. यो इन्टरनेटमा सबै भन्दा कुशल एचटीएमएल निकाटहरू मध्ये एक हो जसले संरचित र असंगत फारामहरू दुवै डेटालाई स्क्रैप गर्न सक्छ. अक्टोपारेले तस्बिरहरू, एचटीएमएल फाइलहरू, पाठ फाईलहरू, भिडीयोहरू, र अडियोहरूबाट उपयोगी डेटा हान्छन्.
युपाथको प्रयोग गर्दै, तपाइँ सजिलैसँग फारम भर्ने र नेभिगेसन स्वचालित रूपमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ. यो इन्टरनेटमा एक सटीक, सरल र अचम्ममा एचटीएमएल अन्वेषक र सामाग्री स्क्रैर छ. यूपाथले जेएस, सिल्वरलाइट, र एचटीएमएलको रूपमा डेटा पढ्दछ, तपाईलाई सबैभन्दा सजिलो र वांछनीय नतिजा दिन्छ.
किमोनो धेरै छिटो काम गर्दछ र समाचारफिड र ट्रेवल पोर्टलहरूबाट सामग्री स्क्रैप गर्दछ।. यो प्रोग्रामर र विकासकर्ताहरूको लागि राम्रो छ. यो एचटीएमएल अन्क्रेताले सयौं वेब पृष्ठहरूबाट एक घन्टा भित्र जानकारी निकाल्छ. किमोनो तपाईले छविहरू, भिडियोहरू, र पाठको रूपमा डेटा निकाल्न सजिलो बनाउनुहुन्छ.
5. स्क्रिन स्क्रैपर:
स्क्रिन स्क्रैपर एक उत्कृष्ट स्क्रैपर्स मध्ये एक हो जसले सजिलै सँग विभिन्न एचटीएमएल कागजातबाट डेटा निकाल्न मद्दत गर्दछ।. यसले कठिन र सजिलो कार्यहरू दुवै प्रदर्शन गर्न सक्छ र लाभ प्राप्त गर्नका लागि नेभिगेसन र सटीक डेटा निकासी विकल्पहरू धेरै छन्. यद्यपि, स्क्रिन स्क्रैपरलाई केही प्रोग्रामिङ र कोडिङ क्षमता चाहिन्छ. साथै, यो उपकरण नि: शुल्क र प्रीमियम संस्करणमा आउँछ र तपाईंको एचटीएमएल फाईलहरूको लागि आदर्श छ.
स्क्रैप उच्च स्तरको सामग्री हो र स्क्रिन स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो जुन तपाईंको HTML कागजातहरूको लागि राम्रो छ।. यो एक शक्तिशाली ढाँचा हो, वेब पेज अनुक्रमणिका प्रयोग गरी ब्लगहरू र साइटहरूबाट सजिलै डेटा निकाल्नुहोस्. स्क्रैपले एचटीएमएल कागजातहरूको लागि प्रभावकारी छ, र यो प्रसोधन गर्दा तपाईंको डाटाको गुणस्तरको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ.
7. पार्स गर्नुहोस्: हब:
पार्स हबले कुनै पनि समय वेब क्रेलरमा प्रश्नहरू रिडाइरेक्ट गर्दछ र उन्नत मेटिफिकेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ HTML कागजातहरू पहिचान गर्न र उनीहरूको उपयोगी डेटा स्क्रैप गर्दछ।. पार्सहोब लिनक्स, विन्डोज र म्याक ओएस एक्स सँग मिल्दो छ.
8. स्पैम विशेषज्ञहरु:
स्पैम एक्सप्रेस उपकरण इमेल स्पैम को पहिचान र समाप्त गर्दछ।. यसको अलावा, यो तपाईंको एचटीएमएल फाईलहरू प्रशोधन गर्दछ र एक शक्तिशाली एचटीएमएल एक्लेक्टर हो. यसको केहि उत्कृष्ट विकल्पहरू सिंक्रोनाइजेसन र कुनै एचटीएमएल फाइलको कन्फिगरेसन हुन्. यसलाई स्थानीय रूपमा र बादलहरूमा तैनात गर्न सकिन्छ. SpamExperts लाई बहिर्गमन र आने वाला डेटा को निगरानी गर्दछ, तपाईंलाई सर्वोत्तम संभव परिणाम प्रदान गर्दछ.